Blog – Page2– Gaming Kwee
Rigs from Shops
Hardware Price Lists
Gaming Kwee > Blog
Aung Ye Maw (1)
X-Plane 11 (2)
Competition, Mobile Gaming, PUBG
PUBG Mobile ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်မယ့် Huawei New Year Championship 2018 ကို ပြုလုပ်တော့မယ်…
ကမ္ဘာအဝှမ်း လူကြိုက်များလျက်ရှိတဲ့ PUBG မိုဘိုင်းဂိမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံက Player တွေအတွက် Huawei New Year Championship 2018 ပြိုင်ပွဲ ကြီး ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Huawei ကနေတဆင့် သိရပါတယ်။
အခု ကျင်းပမယ့် Huawei New Year Championship 2018 ပြိုင်ပွဲကြီးကို Huawei နဲ့ Game Cast Network Myanmar တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူ မည်သူမဆို အခမဲ့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်လျှာက်လွှာတွေကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက်ကနေ ၂၂ ရက်အထိ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် Google Form ကို အသုံးပြပြီး လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ PUBG ဂိမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ခြိုက်စွာကစားသူဦးရေ များပြားလာတာနဲ့ အညီ ကျွမ်းကျင်တဲ့PUBG Mobile အသင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့နဲ့ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအသင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး Huawei New Year Championship 2018 ပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ
အနိုင်ရရှိသတဲ့ ကစားသမားများကို စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ (မြန်မာငွေကျပ် ၇၅သိန်းခန့်) ချီးမြင့်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei Device Myanmar မှ Marketing Director ဖြစ်တဲ့ မခင်ရတနာဝင်းက “အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကို နှစ်သက်ကြသူတိုင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ Huawei Nova Series ဖုန်းတွေက PUBG ဂိမ်းနဲ့အတူ လူကြီး၊ လူငယ်တွေအကြားမှာ လူကြိုက်များလာနေပါပြီ။ ဂိမ်းကစားရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံတွေကို ပေးအပ်နိုင်ဖို့ Huawei ကနေ ဖန်တီးထားတဲ့ GPU Turbo ကို Huawei Nova3နဲ့ 3i တို့မှာ ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် PUBG ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာလည်း ထစ်ငေါ့ခြင်းမရှိဘဲ စိတ်တိုင်းကျ ကစားနိုင်လို့ သုံးစွဲသူတွေ ကျေနပ်နှစ်သက်ကြမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ PUBG Player တိုင်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် အခုလို ဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးကိုလည်း Huawei New Year Championship 2018 ကတစ်ဆင့် ယူဆောင်လာပေးလိုက်နိုင်ပါပြီ။ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကနေတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေအထိ တက်လှမ်းနိုင်အောင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အခုလို အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့လည်း အွန်လိုင်းဂိမ်းကို နှစ်သက်ကြတဲ့ သုံးစွဲသူတွေ ပိုမိုစိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေဖို့ နည်းပညာ တီထွင်ပံ့ပိုးမှုတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Game Cast Network Myanmar ရဲ့ Senior Administration ဖြစ်သူ ကိုစိုးမိုးအေးကလည်း ”ယခုကျင်းပတဲ့ PUBG Mobile ပွဲက ကျွန်တော်တို့အတွက် ဒီ Game နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းပါ။ ပထမဆုံး ဆိုပေမယ့်လို့ ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်၊ စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Main Event မှာဆိုရင်လည်း လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Esports ပြိုင်ပွဲတွေထဲမှာမှ Player အများဆုံး On stage ဆော့မယ့် အကြီးဆုံး ပွဲတစ်ခုဖြစ်အောင် ပုံဖော်ထားပါတယ်။ PUBG Mobile နဲ့ ပတ်သက်လို့ Professional Team တွေ ဒီပွဲကနေစပြီး ပေါ်ထွက်လာဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PUBG Mobile နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းမှာတင် ယုံကြည်ပြီး လက်တွဲပေးတဲ့ Huawei ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲ၏ အစောပိုင်း Qualifier ပွဲစဉ်များကို လေးခုခွဲ၍ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Qualifier တစ်ခုစီမှာ အသင်း ၂၅ သင်းက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာ နေထိုင်သူများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် Qualifier 1,2 နှင့်3တို့ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး တခြားသောမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် Qualifier 4
ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Qualifier တစ်ခုစီမှာ အနိုင်ရရှိတဲ့ အသင်း ၄သင်းက ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ Junction City မှာ ကျင်းပမည့် Grand Final မှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး Qualifier4က တက်ရောက်တဲ့ အသင်းတွေအတွက် ရန်ကုန်မြို့ကို စရိတ်ငြိမ်း ခေါ်ယူယှဉ်ပြိုင်ကစားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Grand Final ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အနိုင်ရရှိတဲ့ ချန်ပီယံအသင်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၊ 1st Runner Up က အမေရိကန်ဒါ်လာ
၁၀၀၀၊ 2nd Runner Up က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၊ 3rd Runner Up က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀ နဲ့ 4th Runner Up က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ အသီးသီး ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပွဲစဉ်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများကို Huawei Myanmar ရဲ့ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ https://www.facebook.com/huaweitechmm နဲ့ Game Cast Network Myanmar ၏ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ https://www.facebook.com/gcnmyanmar/ မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Register ပြုလုပ်ဖို့ – https://bit.ly/2QDvy23
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ – https://bit.ly/2A4GPhu
အခု ဖော်ပြထားတာကတော့ ဒီဇင်ဘာလအတွက် အကောင်းဆုံး Android နဲ့ iOS ဂိမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ လင့်တွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်နော်…
1) F1 Mobile Racing
Download Play Store :- https://goo.gl/vEKu3M iTunes :- https://goo.gl/XpNZ6T
2) Flip Skater
Download Play Store :- https://goo.gl/U9ocZ7 iTunes :- https://goo.gl/i8SQLp
3) Heroes Of Warland
Download Play Store :- https://goo.gl/sKrKyj iTunes :- https://goo.gl/ZHH4pf
4) Bike Unchained 2
Download Play Store :- https://goo.gl/wsokAN iTunes :- https://goo.gl/k5XLXk
5) Faraway 4
Download Play Store :- https://goo.gl/v2oo6A iTunes :- https://goo.gl/eoecug
6) Sega Heroes
Download Play Store :- https://goo.gl/MUu8y7 iTunes :- https://goo.gl/1bxnMA
7) Fireballs 3D
Download Play Store :- https://goo.gl/xhTp4E iTunes :- https://goo.gl/RkTJyk
8) Alpha Squad 5
Download Play Store :- https://goo.gl/2Vw4gL iTunes :- https://goo.gl/yqt3WM
9) Assassin’s Creed : Rebellion
Download Play Store :- https://goo.gl/RKUQhG iTunes :- https://goo.gl/5wnr8g
10) Command & Conquer Rivals
Download Play Store :- https://goo.gl/SJCkQG iTunes :- https://goo.gl/YhhbtU
Steam မှာ လူတွေအလိုချင်ဆုံးဂိမ်းတွေ
Steam မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Game တွေ ဂိမ်းတွေကို wishlist လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အခု အဲဒီ့ ဂိမ်းတွေ ဘယ်ဂိမ်းတွေလဲဆိုတာကို Steam က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကဲ ကိုယ်တွေ wishlist လုပ်ထားတဲ့ Game နဲ့ လူအများ wishlist လုပ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေဘယ်လောက် ထပ်တူကျလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
Competition, Gaming, PUBG, Technology
တစ်ကယ်ကြီးပါ… ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဂိမ်မာတွေ အိမ်မှာ ကပ်ပြီးမနေသင့်ပါဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပွဲကြီး ၂ ပွဲကို ၂ နေရာမှာ လုပ်နေလို့ပါ။
ပထမပွဲက GeForce Cup Myanmar PUBG Tournament (PC) ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပြီး NVIDIA GeForce Myanmar နှင့် Colorful Technology တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခါတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ မတူပဲ ထူးခြားတာက ပထမရရှိတဲ့ အသင်းက တစ်ဦးစီကိုကာလတန်ဖိုး ၇ သိန်းထက်မနည်းတဲ့ဆုတွေကိုရရှိမယ့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ ကျင်းပမယ့် Colorful Gaming Union (CGU) မှာ နေစရိတ် သွားစရိတ်ငြိမ်း sponsor နဲ့ပေးမှာမို့လို့ တော်တော်ကြီးကို အကြိတ်အနယ်ရှိမှာဖြစ်မယ့်ပွဲမို့လို့ PUGB သမားတွေ မဖြစ်မနေ သွားရောက်အားပေးသင့်ပါတယ်။
ပွဲလုပ်မယ့်နေရာက OX Esport Center ဖြစ်ပြီး လိပ်စာက အမှတ် (321), ရတနာလမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာ ရန်ကုန် ဖြစ်ပြီး ပွဲကို မနက် ၉ နာရီကနေ စမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပွဲက နေ့လည် ၂ နာရီ မှာစမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုပေးပွဲကတော့ ညနေ ၄ နာရီပါ။
ဒုတိယပွဲကတော့ ဖန်တီးရာမှာ လုပ်နေတဲ့ Game Dev Challenge ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Game Developer တွေတိုးများလာစေဖို့၊ ဂိမ်းတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး Game တွေကို ဖန်တီးချင်ကြတဲ့ အသိုင်းအဝန်းက လူကြီးလူငယ်တွေ အတူတူတွေ့ဆုံနိုင်ကြဖို့ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ အဆင့်မြင့်တဲ့ Game တွေထက်ပေါ်လာစေဖို့အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ကနေ စပြီး ကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေက မိမိတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ Game တွေကို ဒိုင်လူကြီးတွေဆီမှာ မနက် ၁၀ နာရီကနေစပြီး အသင်းလိုက် တက်ရောက်ပြသမှာ ဖြစ်ပြီး လာခဲ့ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က Public Game show အချိန်ဖြစ်တဲ့ နေ့လည် ၂ နာရီ ၄၅ ပါ…။ အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဆုပေးပွဲကို ညနေ ၄ နာရီကနေ စပြီးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ ပြည်တွင်း လူငယ် Game Developer တွေရဲ့လက်ရာတွေကို ကြည့်ချင်တယ် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ လာသင့်ပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးတွေထဲမှာ ကွီးနဲ့ Simba Gaming တို့လည်း ပါတာမို့လို့ လာတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ညနေပိုင်းမှာ ကြွလာခဲ့ကြပါနော်…။
ပွဲလုပ်မယ့်နေရာက ရန်ကုန်မြို့လယ်က ဖန်တီးရာ မှာဖြစ်ပြီး Royal River View Condo (၁၀ ထပ်), အမှတ် ၆၂၈၊ ၆၃၆ ကုန်သည်လမ်း (၂၉ လမ်းနဲ့ လမ်း ၃၀ ကြား) ပန်းဘဲတန်း ရန်ကုန် ပါ။
Competition, Gaming, Technology
ရန်ကုန်မြို့လယ်က ဖန်တီးရာမှာ ဂိမ်း Development ပွဲ (ဂိမ်းတွေရေးတဲ့ပြိုင်ပွဲ) တစ်ခုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ဒီလ ၉ ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ လာရောက်ကြည်ရှုသူတွေကိုလည်း လက်တွေ့ပြသမှာပါတဲ့…
ကိုယ်တွေက ဂိမ်းတော့ဆော့တယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေလို လူငယ် ဂိမ်း Developer တွေရဲ့ လက်ရာတွေ၊ ပြည်တွင်း ဂိမ်း Developer တွေရဲ့ လက်စွမ်းတွေကို သိချင်ကြည့်ချင်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဖန်တီးရာမှာ လုပ်နေတဲ့ Game Dev Challenge ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ကို တက်ရောက်ဖို့ ဂိမ်းဝါသနာရှင်အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်…။
Game Dev Challenge ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့သူတွေကို ပြန်လည်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ Game Developer တွေတိုးများလာစေဖို့၊ ဂိမ်းတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး Game တွေကို ဖန်တီးချင်ကြတဲ့ အသိုင်းအဝန်းက လူကြီးလူငယ်တွေ အတူတူတွေ့ဆုံနိုင်ကြဖို့ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ အဆင့်မြင့်တဲ့ Game တွေထက်ပေါ်လာစေဖို့အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ကနေ စပြီး ကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေက မိမိတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ Game တွေကို တက်ရောက်ကြတဲ့သူတွေကို ပြသတာတွေ အကဲဖြတ်နိုင်လူကြီးတွေကို ရှင်းလင်းပြသတာတွေကို ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်လို့ အစောကပြောခဲ့သလို လူငယ် ဂိမ်း Developer တွေရဲ့ လက်ရာတွေ၊ ပြည်တွင်း ဂိမ်း Developer တွေရဲ့ လက်စွမ်းတွေ ကို ကြည့်ချင် သိချင်တဲ့ ဂိမ်း ဝါသနာရှင်တွေ အားလုံးကို တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်…။
အခုလို ဂိမ်း Developer တွေရဲ့ လက်ရာတွေကို ကြည့်ရှုစမ်းသပ်ပြီး ဘယ်အသင်း အနိုင်ရရှိမလဲဆိုတာကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက် နေ့လည် ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ် မှာ ဖန်တီးရာကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်…
Register လုပ်တဲ့အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး နေရာတွေ စီစဉ်ပေးရမှာမို့လို့ လာမယ်ဆိုရင်တော့ http://bit.ly/GDCFinal မှာ Register လေးတော့ လုပ်ပေးကြပါနော်…။
628/636 Merchant Road, (10th Floor, Royal River View Condo) Between 29th and, 30th St, Yangon, Myanmar.
Photo Credit: Phandeeyar
Gaming, Mobile Gaming, Uncategorized
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ၂၀၁၉တွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမယ့် အကြိမ် (၃၀)မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ (SEA Game) ၌ Mobile Legend ဂိမ်းကို အီလက်ထရွန်နစ် အား ကစားနည်း (e-Sport) အဖြစ် ပထမဆုံး ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် အရှေ့ တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ကော်မတီ (Phil SGOC) က သတင်းထုတ်ပြန်သည် ဆိုပြီး 7Days News Journal ရဲ့ Facebook Page မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲ့ကော်မတီက e-Sport ကို အားကစားနည်းတစ် မျိုးအဖြစ် ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Hardware ထုတ်လုပ်တဲ့ Razer ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးတွဲဆောင်ရွက်ဖို့ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်က ကြေညာခဲ့တယ်ဆိုပြီး Fox Sport အာရှဝက်ဘ် ဆိုက်က ဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့။
၂၀၁၉ SEA Game မှာ အီလက်ထရွန်နစ် ဂိမ်းခြောက်မျိုး ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ပြိုင်ရမယ့် ဂိမ်းနှစ်မျိုး၊ ကွန်ပျူတာ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ဂိမ်းနှစ်မျိုးနဲ့ လက်ကိုင်ခလုတ်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ဂိမ်းနှစ်မျိုး ထည့်သွင်းကျင်းပပြီး ရွှေတံဆိပ်ဆုပေးအပ်မှာဆိုတဲ့အကြောင်း Razer ကုမ္ပဏီ ရဲ့ မဟာဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ် Limeng Lee က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂိမ်းခြောက်မျိုး ထဲကနေ MobileLegend ဂိမ်းကို ပထမဆုံးအတည် ပြုပြီး ကျန်ဂိမ်းအမျိုးအစားငါးခု ကို ဒီဇင်ဘာမှာ ထပ်မံရွေးချယ်မှာလို့ အရှေ့တောင် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကော်မတီ (Phil SGOC) က ဆိုပါတယ်။
‘‘ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အ စည်းထဲက ဂိမ်းကစားသူတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ် တဲ့ e-Sport အားကစားနည်းကို အရှေ့တောင်အာရှ SEA Game ပြိုင်ပွဲမှာ Razer နဲ့အတူ လက်တွဲ ပြီး ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ ဂုဏ် ယူမိပါတယ်’’ဟု အရှေ့တောင် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကော်မတီ (Phil SGOC) ဥက္ကဋ္ဌ Alan Peter Cayetno က ပြောခဲ့တာပါ။
ရွေးချယ်အတည်ပြုခံရမယ့် e-Sport (အီလက်ထရွန်နစ် အားကစားနည်းများ)က နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်အားကစားကော်မတီရဲ့ စည်းမျဉ်းများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ လောင်းကစားဆန်မှုတွေကို အားပေးတဲ့ဟာတွ မဖြစ်စေရ ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားကြောင်း (Phil SGOC) က ပြောပါတယ်။
Gamer အပေါင်း အားလုံးသိကြတဲ့ MobileLegend ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကစားသူ ၅ ဒသမ ၃ သန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုပြီး Mooton ဂိမ်းကုမ္ပဏီရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
e-Sport အားကစားနည်း ကို ယခုနှစ် ကျင်းပခဲ့သော အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲမှာ သရုပ်ပြ ပြိုင်ပွဲများအဖြစ် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ဆုတံဆိပ်မပေးဘဲ ၂၀၁၉ အရှေ့တောင်အာရှ အား ကစားပြိုင်ပွဲမှသာ တရားဝင်ထည့်သွင်း ကျင်းပဖို့ ပထမဆုံးအကြိမ် အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခု ဆောင်းပါးကို 7Days Journal မှ ကိုနိုင်လင်းအောင်၏ “Mobile Legend ဂိမ်းကို e-Sport အားကစားအဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်ဆီးဂိမ်းတွင် ထည့်သွင်း” အမည်ရှိ ဆောင်းပါးမှ မှီငြမ်းကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
nVidia, Promotions, Technology
ဒီဇင်ဘာလ ရောက်ရှိလာပါပြီ… New Year ကာလ ခရီးထွက်မယ့်သူတွေလည်းရှိသလို ကိုယ်တွေလို အိမ်တွင်းပုန်းပြီး game တွေထဲမှာ ဝုန်းကြမယ့် Gamer တွေလည်း အများကြီးပါ။
ပိတ်ရက်မတိုင်ခင် Graphics ကဒ်တွေ မြှင့်မယ်… ပြီးမှ အမုန်းဝုန်းမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အကောင်းဆုံး အချိန်ကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ အဲတာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ nVIDIA ကဒ်တွေကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် Battlefield V တို့ Monster Hunter တို့ အပြင် Fortnite Bundleကို ရရှိကြမှာ ဖြစ်လို့ nVIDIA ကဒ်တွေကို ဝယ်ဖို့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ပါနော်…
ကဲ ဘယ်ဆိုင်က ဘယ်လို Deal တွေပေးနေတယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
ပထမဆုံး Deal က B2HD က ဖြစ်ပါတယ်…
အဲတာကတော့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Zotac Graphics card တွေ ဝယ်ယူပြီး အထူးလက်ဆောင် game code တွေ ရရှိမှပါ။
ဝယ်ရမယ့် ကဒ်တွေ ဝယ်ရမယ့်အချိန်နဲ့ ရမယ့် Game တွေကို ကြည်လိုက်ကြရအောင်…
ကဒ် > ZOTAC RTX 2080Ti, RTX 2080, RTX 2070
အချိန် > နိုဝင်ဘာ ၂၀ ကနေ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက် (ပစ္စည်းရှိတဲ့အချိန်) အတွင်း
Free ရမယ့် Game > Battlefield V
အသေးစိတ်ကို http://www.zotac.com/sg/page/Battlefield-V-game-bundle မှာ ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဂိမ်းကုဒ်ရယူဖို့ -> https://www.zotac.com/sg/page/redeem-Battlefield-V
ကဒ် > ZOTAC GTX 1070Ti, GTX 1070, GTX 1060
Free ရမယ့် Game > Monster Hunter World
Free ရမယ့် Ingame item> Fortnite Counter Attack Set (2000 vbucks, reflex outfit (rare), pivot glider (rare), angular axe pickaxe (uncommon), response unit back bling)
Monster hunter game အကြောင်း http://www.zotac.com/…/page/monster-hunter-world-game-bundle
Fortnite set အကြောင်း https://www.zotac.com/sg/page/fortnite-bundle တွင်
Monster hunter game code ရယူဖို့ -> https://www.zotac.com/sg/page/redeem-monster-hunter-world
Fortnite counterattack set ရယူဖို့ -> https://www.zotac.com/sg/page/redeem-fortnite.
ZOTAC graphics card များကို ယခုအခါ မြန်မာပြည်တွင် B2HD မှ တရားဝင်ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိပြီး တရားဝင် အာမခံ ၃ နှစ်ပါရှိပါသည်။
ထပ်ဆင့် ခံစားခွင့်အနေနဲ့ December နှင့် January လများအတွင်း ZOTAC graphics card များဝယ်ယူပါက ZOTAC T shirt, mousepad, magnet များကို လက်ဆောင်ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (ပစ္စည်းလက်ကျန်ရှိသည်အထိသာ)
ZOTAC ကဒ်တွေရဲ့ ဈေးတွေကို ဒီမှာနှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယ Deal က Tech Ace က ဖြစ်ပါတယ်…
အဲကကတော့ Colorful RTX တွေဝယ်ယူမယ့် Customer များအတွက် 60$ တန် Battlefield V Game Code ရနိုင်မယ့်ဟာပါ။
ကဒ် > Colorful RTX 2080Ti, RTX 2080, RTX 2070
ကဒ် > Colorful GTX 1070Ti, GTX 1070, GTX 1060 6gb
Colorful ကဒ်တွေရဲ့ ဈေးတွေကို ဒီမှာနှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တတိယ Deal က nVIDIA က ဖြစ်ပါတယ်…
အဲတာကတော့ ဘယ် ဆိုင်ကဝယ်ဝယ် ရရှိမယ့် Fortnite Bundle ဖြစ်ပြီး မှာ https://nvda.ws/2raVgvl ကနေတဆင့် သွားရမှာပါတဲ့။ Caim လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတာ… အသေးစိတ် သိချင်တာရှိရင် nVIDIA ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Page ဖြစ်တဲ့ NVIDIA GeForce Myanmar မှာသွားပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
လက်ရှိ Promo တွေအပြင် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ထိ ရှိဦးမယ့် MSI ရဲ့ Promo လည်း ရှိပါသေးတယ်နော်… Assassin’s Creed Odyssey ကို FREE ပေးမှဖြစ်ပါတယ်… သိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာနှိပ်ပါ
နှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ Game Dev Challenge 2018 ကို ဖန်တီးရာမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီမှာ စတင်ကျင်းပမှာပါ။
ဂိမ်းကို Development လုပ်တတ်သည်ဖြစ်စေ၊ Development လုပ်ဖို့ စိတ်ပါဝင်စားသည်ဖြစ်စေ ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Unity နဲ့ Game Concept တွေကို MCTC (Myanmar Creative Technology College) နဲ့ Save in your Brain Entertainment တို့က နည်းပြတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက လာရောက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းမရှိတဲ့သူတွေကို အသင်းတွေ ဖွဲ့ပေးမယ့်အပြင် Unity software မရှိတဲ့သူတွေကိုလည်း ထည့်ပေးရမှာမို့လို့ ပွဲစတဲ့ရက် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ မနက် ၉ နာရီအရောက် ဖန်တီးရာကို လာခဲ့ပေးဖို့ ဖန်တီးရာကနေ ကြေငြာထားပါတယ်။
အသင်းတစ်သင်းမှာ လူ ၁ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်အထိ ပါဝင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အကယ်လို့ အသင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း အသင်းမရှိတဲ့သူတွေ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံပြီး အသင်းတစ်သင်းအဖြစ် ပါဝင်လို့ရပါသေးတယ်နော်…။
အချိန် ၉ ရက်အတွင်း အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ရှေ့ပြေးပုံစံ (Prototype) ဂိမ်းလေးထွက်လာရင် ရပါပြီ။ ပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ မိမိတို့ရဲ့ ဂိမ်းကို ဒိုင်လူကြီးတွေကို တင်ဆက်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထွက်လာတဲ့ Game တွေကိုလည်း မိမိအဖွဲ့၊ မိမိကိုယ်တိုင် ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီး အနိုင်ရရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ဆုတွေ ချီးမြှင့်ပေးမယ့်အပြင် မိမိအဖွဲ့နာမည်နဲ့ ကိုယ်ပိုင် Public Game တစ်ခုဖြစ်လာအောင်လည်း ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းချစ်သူတွေ ဂိမ်းဖန်တီးချင်တဲ့သူတွေ တက်ရောက်ပါဝင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်နော်…
နေရာ၊ အင်တာနက်နဲ့ တခြားစီစဉ်စရာလေးတွေရှိတဲ့အတွက် http://bit.ly/2zqtvnd မှာ
အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ၊ တက်ရောက်ရမယ့်အချိန်တွေ၊ Training တွေပေးမယ့် အချိန်တွေကို Facebook Group မှာ ကြေညာပေးမှာဖြစ်လို့ Register လုပ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ e-mail မှာ Facebook Group ရဲ့ Link ကို ပို့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းချစ်သူတွေ ဂိမ်းဖန်တီးချင်တဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင် ဂိမ်းထုတ်နိုင်မယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်နေပါပြီနော်…
ဟုတ်ပါတယ်… ဂိမ်းချစ်သူတွေ ဂိမ်းဖန်တီးချင်တဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင် ဂိမ်းထုတ်နိုင်မယ့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်မှာပါ။ အခုလုပ်တာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တောင်မဟုတ်ပဲ မနှစ်က ဒီအချိန်မှာ ၂၀၁၇ ပြိုင်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခု ၂၀၁၈ ပြိုင်ပွဲကို ထပ်လုပ်မှာပါလို့ ဖန်တီးရာက ပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။
(ဖန်တီးရာက ရန်ကုန်မြို့လယ် ကုန်သည်လမ်းပေါ် (၂၉ လမ်း နဲ့ လမ်း ၃၀ ကြား) မှာ ရှိတာမို့လို့ သွားရေးလာရေးလဲ အဆင်ပြေမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ Facebook Page က https://www.facebook.com/phandeeyar/ ဖြစ်ပါတယ်)
ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှ ၉ ရက်နေ့ အထိ ဖန်တီးရာမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Game Developer တွေတိုးများလာစေဖို့၊ ဂိမ်းတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး Game တွေကို ဖန်တီးချင်ကြတဲ့ အသိုင်းအဝန်းက လူကြီးလူငယ်တွေ အတူတူတွေ့ဆုံနိုင်ကြဖို့ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ အဆင့်မြင့်တဲ့ Game တွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Game ကိုစိတ်ဝင်စားသောသူအားလုံးကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်စေချင်ပါတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ အသင်းမရှိတဲ့သူတွေက အသင်းဖွဲ့ရမှာဖြစ်ပြီး MCTC (Myanmar Creative Technology College) နဲ့ Save in your Brain Entertainment တို့က နည်းပြတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက လာရောက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်လို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Game Developer တစ်ယောက်မဟုတ်လဲပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ အချိန် ၉ ရက်အတွင်း အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ရှေ့ပြေးပုံစံ (Prototype) ဂိမ်းလေးထွက်လာရင် ရပါပြီ။ ပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ မိမိတို့ရဲ့ ဂိမ်းကို ဒိုင်လူကြီးတွေကကို တင်ဆက်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ Game တွေကိုလည်း မိမိအဖွဲ့၊ မိမိကိုယ်တိုင် ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီး အနိုင်ရရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ဆုတွေ ချီးမြှင့်ပေးမယ့်အပြင် Public Game တစ်ခုဖြစ်လာအောင်လည်း ကူညီပေးမှာတဲ့ ခင်ဗျာ။
အခု ကျင်းပမယ့် Game Dev Challenge 2018 တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူတွေအတွက် Free Drink ကို Hype Energy Drink က sponsor အဖြစ် ပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားတဲ့အတွက် Energy Drink တွေ ကြိုက်တတ်တဲ့ Game Developer တွေအတွက် ရေမီးအစုံ ပံ့ပိုးပေးတာပါတယ် တဲ့။
ပွဲအတွက် Facebook event လုပ်ထားပြီး အထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို share သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Event ရဲ့လင့်က http://bit.ly/2zo4r0f ဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်တီးရာဖက်က နေရာ၊ အင်တာနက်နဲ့ တခြားစီစဉ်စရာလေးတွေရှိတဲ့အတွက် http://bit.ly/2zqtvnd မှာ Register လုပ်ပေးဖို့ ပြောထားပါတယ်။ Register လုပ်ထားတဲ့သူတွေကို ပြိုင်ပွဲအတွက် လုပ်ထားတဲ့ Group ရဲ့ လင့်တွေကို e-mail နဲ့ ပို့ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ e-mai တွေကိုလည်း ပြန်စစ်ပေးဖို့ ပြောထားပါတယ်။
ဘော်ဘော်တွေ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ Game Development ဖက် စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေ သိရအောင်လည်း Share ပေးပါဦးနော်…။
For more information https://www.facebook.com/gamingkwee